टेलिकमकाे ‘एनटी च्याटबोट’ सेवा सुरु
आयोमेल संवाददाता काठमाडाैं - मंगलबार, फागुन ४, २०७७
नेपाल टेलिकमका आफ्ना सेवाहरु बारे जानकारी दिन वेबसाइटबाटै च्याटमार्फत स्वचालित रुपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिने गरी एनटी च्याटबोट सेवा शुरु गरेको छ ।
कम्पनीको वेबसाइट (www.ntc.net.np) खोल्नासाथ शुुरु पेजमा एनटी च्याटबोटको सानो स्क्रिन स्वचालित रुपमा देखापर्दछ । त्यहाँ Need Help ? Welcome to NT Chatbot (निड हेल्प ? वेलकम टु एनटी च्याटबोट) भनेर लेखिएको छ ।
यसमा कम्पनीका विभिन्न सेवाहरुको बारेमा जानकारी लिनका लागि उपलब्ध विकल्पको छनौट गर्न तथा नेपाली÷अंग्रेजी भाषा छनौट गरी प्रश्न लेखेर जिज्ञासा राख्न सकिन्छ ।
कम्पनीका विभिन्न सेवाहरु फोरजी, एफटीटीएच, जीएसएम प्रिपेड, जीएसएम पोस्टपेड, ल्यान्डलाइन, एनटी एप, अनलाइन रिचार्ज, अफर, प्याकेज आदिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न सेवाहरुका बारेमा गुनासो गर्न सकिन्छ । एनटी च्याटबोट सेवाले वेबसाइटमा राखिएका विवरणका आधारमा स्वचालित रुपमा जानकारी उपलब्ध गराउँछ ।
कम्पनीका सेवाग्राहीले कुनै सेवाका बारेमा थप जानकारी लिनुपरेमा एनटी च्याटबोट बाहेक कम्पनीका सामाजिक सञ्जालहरु (facebook, twitter, viber community, instagram) प्रयोग गर्न सक्दछन् । ग्राहकहरुले कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम एप’ बाट पनि सेवा तथा सुविधाहरुका बारेमा विभिन्न जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
गत माघ २२ गते कम्पनीको १७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले एनटी च्याटबोट सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ४, २०७७
प्रचण्ड-माधवलाई कसैले पत्याएनन् : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहलाई कसैले विश्वास नगरेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि आफूलाई हटाउन दौडाहामा रहेका प्रचण्ड-माधवलाई कसैले पत्याउन नसकेको उनले बताएका छन्। आयोमेल संवाददाता
कांग्रेस नेता जोशीकाे स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै
उनको उपचारमा संलग्न न्यूरो विशेषाज्ञ डा. राजीव झाका अनुसार स्वास्थ्यमा थोरै सुधार देखिएको हो। उनको शरीरको दायापट्टीको भाग थोरै चलेको उनले बताए। आयोमेल संवाददाता